शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनको लागि हामी के बौलाएका छौं र ? : जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण – Khabar Patrika Np
शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनको लागि हामी के बौलाएका छौं र ? : जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०१, २०७८ समय: १६:४१:४०
देउवालाई विश्वासको मत दिनको लागि हामी बौलाएका छौं र ? : कर्ण
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूहरुले कुनैपनि हालतमा विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने,‘शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनको लागि हामी के बौलाएका छौं र ?’
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कुनै पहल नगरेको गुनासो पोखे ।
उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई पनि असंवैधानिकको संज्ञा दिए ।
उनले भने,‘यो फैसला संविधान टार्गेटेड छैन् । यो एउटा पक्ष टार्गेटेड हो । यो व्यक्ति टार्गेटेड हो । यो एउटा पक्षको लक्ष्यलाई मलजल गर्ने फैसला भयो ।’ उनले अदालतको फैसला संविधानसम्म्त नभएपनि उक्त फैसलालाई मान्ने स्पष्ट पारे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओाली र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवादसमेत दिए ।
उनले भने,‘उहाँहरुले फैसला स्विकार गर्नुभयो, र देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउनुभयो ।’ उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न चूनौति रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘विपक्षी धेरै मजबुद छ । जथाभावी हिँड्न गाह«ो छ । यो सरकारसामू धेरै चूनौति र अवसर पनि छन् ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने कुरा व्यक्तिगत राय भएको सुनाए । तर, यसबारेमा भोलि बस्ने पार्टीको बैठकले आवश्यक निर्णय लिने पनि कर्णले जानकारी दिए । उनले आफूहरुको अहिलेपनि संविधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण मुद्दा बाँकी नै रहेकोले माग पूरा गराउन लागिपर्ने पनि बताए ।
यो पनि हेर्नू
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या १८ करोड ९७ लाख नाघ्यो
साउन ०१, एजेन्सी । विश्वमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल संख्या १८ करोड ९७ लाख २ हजार १९० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ लाख ५५ हजार १८४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
वल्डोमिटर्सका अनुसार सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिकामा रहेका छन् । अमेरिकामा अहिले सम्म ३ करोड ४८ लाख ८७ हजार १५५ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतमा अहिले सम्म कोरोना सङ्क्रमितको कुल संख्या ३ करोड १० लाख २५ हजार ८७५ पुगेको छ ।
त्यस्तै तेस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ । ब्राजिलमा अहिले सम्म १ करोड ९२ लाख ६२ हजार ५१८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । साथै रुस, फ्रान्स, टर्की, र बेलायतमा ५ लाख बढिमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया र इटालीमा ४ लाख बढि कोरोना संक्रमित भएका छन् ।
२०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमणबाट हालसम्म विश्वमा ४० लाख ८२ हजार ६३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।